Ukunqunyulwa komsebenzi wabakhweli e-UK kunika amandla amatsha kuhambo lwenqwelomoya lwasekhaya
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziHlumayo zase-UK » Ukunqunyulwa komsebenzi wabakhweli e-UK kunika amandla amatsha kuhambo lwenqwelomoya lwasekhaya
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Ukunqunyulwa komsebenzi wabakhweli e-UK kunika amandla amatsha kuhambo lwenqwelomoya lwasekhaya.
Iinqwelomoya ezinobukho obukhulu kwimarike yasekhaya yase-UK zimiselwe ukuba zizuze kakhulu kolu tshintsho. I-APD igxekwe ngokubamba iinqwelomoya ekuqhubeni iinqwelo ezinkulu ekhaya kwaye ezi ndaba zinokuwakhulula amakhamandela.
Ngokunyuka kwemfuno yohambo lwasekhaya, iinqwelomoya zinokuzuza kakhulu kwi-APD cut.
Ukunqunyulwa kwe-APD kuya kuhlangatyezwana kakuhle neenqwelomoya zasekhaya, ngakumbi ezo zinenethiwekhi ezinkulu.
Iinqwelomoya zeenqwelo moya zase-UK zijonge ukukhonza kwiindawo zasekhaya ngenxa yokunyuka kwemfuno, ngelixa imfuno yohambo lwamazwe ngamazwe ihleli icinezelwe.
Iinqwelomoya ezizinze e-UK ziya kubona ukuncitshiswa komsebenzi wabakhweli bomoya wasekhaya (APD) njengokukhuthaza okubalulekileyo kushishino lweenqwelomoya. Ngokunyuka kwemfuno yohambo lwasekhaya, kudityaniswe nesiqingatha se-APD ngo-2023, iinqwelomoya zinokuzuza kakhulu.
Ukunqunyulwa kwe-APD kuya kuhlangatyezwana kakuhle neenqwelomoya zasekhaya, ngakumbi ezo zinenethiwekhi ezinkulu. I-£ 7 (i-$ 9.65) yokunciphisa irhafu iya kuvumela abathwali ukuba banciphise amaxabiso ukuqhubela phambili ukuvuselela imfuno. Ngaphaya koko, iinqwelomoya zeenqwelomoya zase-UK zijonge ukukhonza kwiindawo zasekhaya ngokuphendula ukunyuka kwemfuno, ngelixa imfuno yohambo lwamazwe ngamazwe ihleli icinezelwe. Ngothungelwano olubanzi, abahambi base-UK banokuvuma ngakumbi ukuhamba kwiinqwelomoya zasekhaya kwixesha elizayo xa kuncitshiswa irhafu. Nangona kunjalo, ukunyuka kwemfuno kuya kwenzeka kuphela ukuba ugcino lweendleko lugqithiselwe kumthengi ngohlobo lwamaxabiso amatikiti angabizi.
Logan Air, Airways British, kunye ne-Eastern Airways inothungelwano olubanzi lwasekhaya kwaye baphakathi kwabadlali abaza kuxhamla kwi-UK yokunciphisa i-APD yayo yasekhaya. I-Loganair iya kuba ngumxhamli omkhulu, kunye nenqwelomoya igcwalise isithuba esishiywe Yibhabhe ngexesha lobhubhane. Ishishini kudala lifuna ukuba i-APD icuthwe, kwaye ukuncipha kungabona ezinye iinqwelomoya zibonelela ngeendlela ezongezelelweyo njengoko amaxabiso esiba nokhuphiswano ngakumbi kwezinye iindlela zothutho.
Ngaphezu koko, Yibhabhe 2.0 inokuzuza. Ixabiso eliphezulu le-APD e-UK lichazwe njengesona sizathu sibangela ukuba kutheni Yibhabhe iwile. Ukunqunyulwa okubalulekileyo kuya kubonelela ngeemeko ezincomekayo zokusebenza kumthuthi xa iphinda iqalisa.
Kubahambi abaninzi base-UK, izikhundla zabo zemali zitshintshile kumaxesha akutshanje. Uphononongo lwakutsha nje lwabathengi luveze ukuba i-73% yabaphenduli base-UK 'kakhulu', 'kakhulu', okanye 'kancinci' benenkxalabo malunga nemeko yabo yezemali ngenxa yobhubhane, beqaqambisa izibonelelo zokuncitshiswa kwe-APD.
Iinqwelomoya zinokuzabalaza ukuvuselela imfuno ngexesha le-COVID-19 lokubuyisela. Ngeenkxalabo zemali eziphezulu, ukunciphisa i-APD kuya kuvumela abathwali ukuba banciphise amaxabiso kwaye bahlangabezane ngcono neemfuno zabahambi abaqaphela uhlahlo lwabiwo-mali. Ngaphaya koko, ukufikeleleka kubekwe njengeyona nto iphezulu ngabaphenduli base-UK xa besenza isigqibo sokuba baye phi na ngeholide, kunye ne-48% yabaphenduli bakhetha le nto njengeyona ibalulekileyo.
Ukunciphisa i-APD kwiinqwelomoya zasekhaya kunokunyusa imfuno xa iireyithi ezintsha zingena ngo-2023. Kwiminyaka emibini, uhambo lwamazwe ngamazwe lunokufikeleleka ngakumbi kubahambi base-UK. Ukwehliswa kweendleko zeenqwelo moya zasekhaya kunokunceda imarike yokuhamba yase-UK igcine abanye babakhenkethi abakhethe ukuya eholideyini e-UK ngexesha lobhubhani.